दिलवालले राम्रो नचलेपछि शाहरुख–रोहितमा टकराव
२०७२ पौष २६ आइतबार, मुम्बई । फिल्म ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ पछि बलिउड बादशाह शाहरुख खान र निर्देशक रोहित सेठ्ठी पुनः दर्शकमाझ एकपटक पुन धमाल मच्चाउनका लागि ‘दिलवाले’ लिएर आएका थिए । तर यो पटक भने उनीहरुको त्यो सपना पुरा हुन सकेन । फिल्मले १ सय ५० करोडको आँकडा पनि छुन सकेन, जसकारण शाहरुखको कम्पनी रेड चिल्ली इन्टरटेनमेन्ट र रोहितको व्यानर रोहित सेठ्ठी फिल्मस् बीच टकराव शुरु भएको छ । समाचार अनुसार फिल्मले साेचे जस्ताे व्यापार नगरेपछि दुइबीच अाराेप र दाेष लगाउने काम शु ... बाँकी अंश»
चैत्र १२ मा खुल्ने भयो भूकम्पले रोकिएको 'राहदानी'
२०७२ पौष २६ आइतबार, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीको समस्या उठान गरिएको फिल्म ‘राहदानी’ आगामी १२ चैतबाट देशव्यापी प्रदर्शनीमा आउने भएको छ । यस अघि यो फिल्म गत २९ जेठमा रिलिज गर्न लागिएको थियो । गत बैशाखको भूकम्पले यसको प्रदर्शन हुन नसकेपछि राहदानीलाई १२ चैतमा दर्शकमाझ ल्याउन लागिएको यसका प्रस्तुतकर्ता लक्ष्मी ढकालले बताए । चलचित्रको लेखक निर्देशक डब्बु क्षत्री हुन् । मुलुकका करिब २७ लाख युवा जनशक्ति अहिले पनि खाडी मुलुकमा रोजगारीमा रहेकोले उनीहरुका विभिन्न स ... बाँकी अंश»
चेपाङ समुदायकी एक मात्र मोडल मेलिना (भिडियाे)
२०७२ पौष २६ आइतबार, काठमाडौं । मंगोलियन अनुहारकी मेलिना चेपाङ मकवानपुरकी हुन् । मकवानपुरको चेपाङ बस्तीकी मेलिना पछिल्लो समय काँचका पर्दामा देखिन थालेकी छिन् । उनले केही गीतका म्युजिक भिडियोमा आफूलाई कुशल मोडलका रुपमा उतारेकी छन् । कलाकारिताको यात्रामा पछिल्लो दुई वर्षदेखि सक्रिय मेलिना गाउँघरमै हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदै म्युजिक भिडियोसम्म जोडिएकी छन् । मकवानपुरको राक्सिराङ, सरिखेत, मनहरीमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदै उनी यहाँसम्म आएकी हुन् । मकवा ... बाँकी अंश»
४२ वर्ष पुगे 'कहो ना प्यार हे' हिरो
२०७२ पौष २६ आइतबार, मुम्बई । आफ्नो अभिनयका कारण दर्शकको मनमा बस्न सफल बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन आइतबारबाट ४२ वर्षे उमेरमा पाइला टेकेका छन् । ६ वर्षको उमेरदेखि बाल कलाकारका रुपमा फिल्ममा अभिनय गरेका उनलाई अभिनेता तथा निर्देशक पिता राकेश रोशनले अभिनयलाई निखारता ल्याउन मद्धत गरेका थिए । सन् १९८० मा फिल्म ‘आशा’ बाट अभिनय यात्रा शुरु गरेका उनी त्यो बेला ६ वर्षका थिए । यो फिल्ममा उनले एक गीतमा नृत्य गरेर दर्शकको दिल जितेका थिए । यो पछि फिल्म ‘आपके दिवाने’, ‘आसपास’, &l ... बाँकी अंश»
सुटिङमा घाइते भए अमिताभ
२०७२ पौष २६ आइतबार, मुम्बई । बलिउड फिल्म ‘तीन’को सुटिङका क्रममा बलिउड मेगास्टार अमिताभ बच्चन घाइते भएका छन् । अमिताभले ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै आफ्नो ढाडमा चोट लागेको जनाएका छन् । ७३ वर्षे अभिनेता अमिताभ कोलकातामा सुजाय घोषको फिल्मको सुटिङमा व्यस्त हुँदा घाइते भएका हुन् । उनी घाइते हुनासाथ मेडिकल चेकअपका लागि मुम्बई फर्किएका थिए । चिकित्सकका अनुसार उनको ढाडको चोट ठिक हुन अझै केही समय लाग्नेछ । अमिताभले आफुले सिटी स्क्यान गरेर फर्किएको टवीटरमा उल्लेख गरेका छन् । उ ... बाँकी अंश»
रेखाले दिईन् पाखुरा खियाउनु पर्ने सल्लाह
२०७२ पौष २५ शनिबार, काठमाडौं । भूकम्पले भत्काएको सिन्धुपाल्चोक कर्थली–७ पोखरेस्थित श्री ईश्वरीमाला प्रावि ‘हामी उठ्ने छौं फाउण्डेसन’ ले निर्माण सम्पन्न गरी विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । गत बैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले भत्किएको उक्त विद्यालय भवनलाई नयाँ संरचनामा निर्माण गरिएको हो । शुक्रबार आयोजित एक समारोह बीच अभिनेत्री एवं निर्मात्री रेखा थापाले उक्त भवनको उद्घाटन गरेकी हुन् उक्त समारोहमा हाँस्यकलाकार जितु नेपालको पनि उपस्थिती ... बाँकी अंश»
ईकलेज सुन्दरीका अनेक प्रतिभा
२०७२ पौष २५ शनिबार, काठमाडौं । मिस ईकलेज सिजन ६ मा सहभागी १६ जना प्रतियोगीहरुले पुतली सडक स्थित नेम क्याफेमा आज भएको एक कार्यक्रम विच आफ्नो आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छन । उक्त कार्यक्रममा विजिता श्रेष्ठले मन्जुश्री नृत्य प्रस्तुती संगै कार्यक्रमको सुभारम्भ भएको थियो । प्रतिक्षा वानीया , सृजना गुरुङले पनि विभिन्न नेपाली गितमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन भने मैना पुन मगरले भुकम्पको वारेमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन भने सुमीत्रा थानेटले पेन्टीङ गरेर त्यसको महत ... बाँकी अंश»
जुकबक्समा फूलै फूलको मौसम तिमीलाईका गीत
२०७२ पौष २५ शनिबार, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुन लागेको दिनेश डिसी निर्देशित प्रतिक्षित फिल्म ‘फूलै फूलको मौसम तिमीलाई’ को अडियो युट्युब जुकबक्स सार्वजनिक भएको छ । दुई गीत मात्र रहेको फिल्ममा राजेशपायल राई, दीपा लामा, बानीका प्रधान र राज सिग्देलको स्वर छ । दुवै गीतमा सुरेश अधिकारीको संगीत र दिनेश डिसीकै शब्द छ । आमेश भण्डारी र नीता ढुंगानाको रोमान्स रहेको फिल्मको शीर्ष गीतले बजारमा राम्रै चर्चा पाईरहेको छ । ... बाँकी अंश»
मोबाइल बालेर दर्शकले हेरे नाटक
२०७२ पौष २५ शनिबार, काठमाडौं । नेपाली रंगमञ्च इतिहासमै सम्भवतः पहिलोपटक दर्शकहरुले आफ्नै मोबाइलबाट बत्ती बालेर नाटक हेरेका छन् । काठमाडौं मल, सुन्धारास्थित थिएटर मलमा मञ्चन भइरहेको नाटक ‘मान भर्सेज मती’को शुक्रबारको मञ्चनमा दर्शकहरुले यस्तो साथ र उत्साह दिएका हुन् । लोडसेडिङ समयमा जेनेरेटरबाट सञ्चालित काठमाडौं मलमा देशको पछिल्लो परिस्थितिका कारण प्रयाप्त डिजेल नहुँदा एक्कासी बत्ती जाँदा सातौं तल्लाको नाटकघर पनि अन्धकार बन्न पुगेको थियो । नाटकको कथा उत ... बाँकी अंश»
सुल्तानमा सलमानको नायिका अनुष्का
२०७२ पौष २५ शनिबार, मुम्बई । यशराजा फिल्मस्ले आफ्नो नयाँ फिल्म ‘सुल्तान’का लागि नायिकामा अनुष्का शर्मालाई अनुबन्ध गरेको जनाएको छ । फिल्ममा उनले अभिनेता सलमान खानसँग रोमान्स गर्नेछिन् । यो फिल्म निर्माणको घोषणा एक वर्ष अघि नै गरिएको थियो । यसपछि फिल्मको नायिकाको लागि कंगना रनावत, दीपिका पादुकोण, कृति सेनन र परिणति चोपडाको नाम पनि लिइएको थियो । यो फिल्ममा शुरुमा अनुष्काको नाम आए पनि उनले फिल्ममा खेल्नका लागि कुनै पनि कुरा नभएको बताएकी थिईन् । यशराज फिल्मस्को क ... बाँकी अंश»
परिवारले टुटायो श्रद्धा–आदित्यको प्रेम
२०७२ पौष २५ शनिबार, मुम्बई । बलिउड नायिका श्रद्धा कपुर र नायक आदित्य रोय कपुरले फिल्म ‘आशिकी २’ मा गरेको राम्रो अभिनयले निकै तारिफ कमाए । फिल्ममा उनीहरूको क्यामेष्ट्रीलाई दर्शकले रुचाए । उनीहरूलाई रुचाउनुको अर्को कारण थियो, त्यो हो रियल लाइफमा उनीहरूको क्यामेष्ट्री मिलेकै थियो । उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको चर्चा मिडियामा हटकेक नै बनेको थियो । अहिले उनीहरूको ब्रेकअप भइसकेको छ । आदित्य र श्रद्धा अलग–अलग व्यवहारका कलाकार हुन् । आदित्य लजालु छन् र उनी आफ्नो क ... बाँकी अंश»
बागमतीका दर्शकलाई सुनको सिक्रीदेखि बाइकसम्म उपहार (भिडियो)
२०७२ पौष २३ बिहिबार, काठमाडौं । फिल्म रिलिज हुनु भन्दा अघि पनि आक्रामक पब्लिसिटी गरेको फिल्म बागमतीले फिल्म रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा दर्शकका लागि नयाँ स्किम ल्याएको छ । भोलि शुक्रबारबाट अल नेपाल रिलिज हुन लागेको यो फिल्म हेर्ने दर्शकले लक्की ड्रबाट विजेता बन्ने अवसर पाए सुनको सिक्रीदेखि बालासम्म पाउनेछन् भने बम्पर उपहारमा इलेक्ट्रिक बाईकसमेत राखिएको छ । फिल्म युनिटले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त पुरस्कारको स्किम घोषणा गरेको हो । फिल्मकी निर्मात ... बाँकी अंश»
टलकजंग भर्सेस टुल्केका निर्माता टोपी थाप्दै पैसा माग्दै !
२०७२ पौष २३ बिहिबार, काठमाडौं । नेपालीमा एउटा प्रचलित उखान छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । चर्चित फिल्म ‘टलक जंग भर्सेस टुल्के’का निर्माता तथा कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँ अहिले यही उखानलाई चरितार्थ गर्न नयाँ अभियान लिएर सहयोग जुटाउँदै हिडिरहेका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१६ को पहिलो दिन नेपालमा राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाएर युवायुवतीहरुले सामाजिक सञ्जालमा धमाधम फोटो पोष्ट गरिरहँदा त्यसो भोलिपल्ट उनले चाहिँ शीरको टोपी खोलेर ‘टोपी थाप्ने’ दिवस मनाउन आव्हान गर्दै फेस ... बाँकी अंश»
आज विपाशाको जन्मदिन, इन्टरभलमै टुट्यो प्रेम
२०७२ पौष २३ बिहिबार, मुम्बई । बलिउडकी ‘बिल्ली रानी’ विपाशा बसुको आज जन्मदिन हो । अभिनयका साथै हट प्रस्तुतिका कारण बलिउडमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएकी उनी बिहीबारबाट ३७ वर्षमा प्रवेश गर्दैछिन् । उनले जीवनमा धेरैजनासँग प्रेम गरिन्, जसलाई विवाहमा परिणत गर्न सकिनन् । ... बाँकी अंश»
भूकम्पपीडितमाझ इभानाले भनिन्,‘यो देशमा सरकार भन्ने चिज छ कि छैन ?’
२०७२ पौष २३ बिहिबार, भक्तपुर । मिस नेपाल इभाना मानन्धरका रसाएका आँसुलाई विहिवार उनको गगल्सले पनि छेक्न सकेन । मलिन, उदास र आक्रोस मिसिएको अनुहारलाई मेकअपले पनि छोप्न सकेन । उनका चमकदार र सुृन्दर अनुहारमा आएको यो एकाएक परिवर्तनको कारक तत्व भुकम्पबाट पीडित जनताको अवस्था थियो । अनि आँखा रसाउनुको कारण पनि दुःखी जनताको पीडा सुनेर हो । अनि आक्रोस भने सरकारको उदासिपना, गैरजिम्मेवारपना र हेलचक्र्याइका कारण उत्पन्न भएको हो । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ७ का वासिन्दाको टहर ... बाँकी अंश»
कलाकार सुष्मा भन्छिन्,बुर्का लगाएर अफगानिस्तान घुमेँ
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौँ । ‘कहिल्यै बुर्का नलगाएकी मैले बुर्का लगाएँ त्यो पनि विदेश घुम्दा, छोटो कपालमा बुर्का अगाडिदिँदा निकै अनौँठो खालको अनुभव भएको थियो,’ कलाकार सुष्मा राजभण्डारीले दुई महिनाअघि अफगानिस्तानको वामियान घुम्दा बुर्का लगाउँदाको अनुभव सुनाउँदै भनिन्–‘महिलालाई बुर्का नलगाई बाहिर निस्कन नदिइँदो रहेछ । त्यसैले जीवनमा नै पहिलो पटक बुर्का लगाएर घुमेँ ।’ सार्कस्तरीय आर्ट क्याम्पमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कलाकार राजभण्डारीसहित भी ... बाँकी अंश»
को बन्ला फेस अफ द इयर ?
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौं । विभिन्न उमेर र वर्गका लागि सौन्दर्य र प्रतिभा प्रदर्शनको प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको रिवन इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले आप्mनो कम्पनीको परिचय बनेको ‘नेपाल्स फेस अफ द इयर’ यस वर्ष पनि गर्ने भएको छ । दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिताका लागि आगामी माघ २ गते पहिलो चरणको अडिसन गरिने रिवन इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष निशु झाले बताए । झाका अनुसार यस वर्षको यो प्रतियोगितामा महिलाका साथै पुरुषले पनि स्पर्धा गर्न सक्नेछन् भने प्रतियोगिताका विजयीले अन ... बाँकी अंश»
फिल्म फ्लप भएपछि रणवीर दीपिकाले दिए १५ करोड
२०७२ पौष २२ बुधबार, मुम्बई । अभिनय र प्रस्तुतिलाई दर्शकले रुचाए पनि फिल्म ‘तमाशा’ले बक्स अफिसमा फ्लप व्यापार गरेपछि फिल्मका अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले फिल्मका निर्माता संयुक्त रुपमा १५ करोड रुपैंयाँ भारतीय रुपैंयाँ फिर्ता गरिदिएका छन् । यो रकममा रणवीरको १० र दीपिकाको ५ करोड छ । उनीहरुले उक्त रकम युटीवी र निर्माता साजिद नाडियाडवालालाई फिर्ता गरिदिएका हुन् । भारतीय मिडियाका अनुसार फिल्मका वितरकहरुले दीपिका र रणवीरको जोडीलाई हेरेर फिल्म क ... बाँकी अंश»
बहसमा दोलखाको फिल्म सिटीः दोलखामै बनाउनेकी नबनाउने ?
२०७२ पौष २२ बुधबार, काठमाडौं । २०६८ सालको फागुन महिनामा नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले दोलखामा आयोजना गरेको ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र कार्यशाला’को बेला तत्कालिन चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले दोलखामा फिल्म सिटी बन्ने घोषणा गरे । भण्डारीले घोषणा गरेको एक महिना बित्न नपाउँदै दोलखाकै सिंगटीमा भएको एमाले दोलखा क्षेत्र नम्बर २ को अधिवेशन उद्घाटनका तत्कालिन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले आम दोलखाबासीलाई फिल्म सिटी बन्न लागेकोमा बधाई दिँदै स्थानी ... बाँकी अंश»
फेब्रुअरीमा छुट्दै सञ्जय, पाए क्लिन चिट
२०७२ पौष २२ बुधबार, मुम्बई । बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्त आगामी महिना अर्थात फेब्रुअरीमा छुट्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार सञ्जय आगामी फेब्रुअरी २७ मा छुट्नेछन् । छुट्टीको विदा पछाडि दुई दिन ढिला जेल पुगेको मामलामा महाराष्ट्र सरकारले सञ्जयलाई क्लिन चिट दिएको छ । यसकारण पनि उनी फेब्रुअरीको अन्तिम साता जेलबाट छुट्नेछन् । भारतीय मिडियाका अनुसार सञ्जयको राम्रो व्यवहारका कारण पनि उनको छुट्ने मिति छोटिएको छ । छुट्टीको समय भन्दा पनि दुई दिन ढिला यरवदा जेल पुग्दा सञ्जयको र ... बाँकी अंश»